Maxamed cali iyo shacabka awdal midh dan iyo dirir ah baan idhi
Thursday December 07, 2017 - 11:35:35 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Hal waa yaab, hal-na waa ammakaag, hal-na waa yaabka-yaabkii.
1. Hal waa yaab : oo odayada cuqaasha iyo sulaadiinta qaar ka mida makaahiil makadoor ayaa dhawaan warbaahinta la hor yimi iyagoo hanjabaad hawada u marinayaan(saylici) food saarkuna yahay erayga ( dawlada) oo ku goodiyaayey in xillalkii loo soo celiyo shaqaalihii erigooda food saarka looga dhigay u olloleyn xisbi mucaarid ah cadeymo muuqda kadib iyo ku takri falida hantida dawlada.
2. Hal-na waa ammakaag: falkaa shaqaalaha la eryay ee waliba duqeyda iy waxgaradku gardaro ugu doodayaan; waxa sifahaa khaldan sii xoojiyey markale( xildhibaano iyo dhalinyaro u badheedhay gardarada garabka haysata ) iyaga oo warbaahinta goolaaftan, dhaar colaadeed ku goodiye si ba’an.
3. Hal kalena waa yaabka yaab kii : Maxamed cali aw cabdi wuxu yidhi: ( reer kayga makaahiil shaqaalaha dawlada ee heer gobol ee xilligii ololihii iyagoo shaqaale ah xisbiga mucaarad ka ee aan sharaxnaa u ololeynaayey !! gardaranaa dawladu maxay iigu daba mareysaa ?! haday dawladu deyn weydo shaqaalahaasi !! waxa ku dhici doona qosol gariir !! farta oo ay dhexda ka qaniinto iyo qoomamo !! cida uu hadalka u wadey waa la garanayaa!!).
4. Maxamed cali hal u dan iyo dirir ah : waxa aad tahay nin reer awbare ah, waxba dabada awdal ha soo galine killinka 5aad ayaa kuu baahan, dalkaagii iyo deegaankaagii ayaa dayacani halkan hadal iyo hanjabaad kaagama furnee qabo dalkaagii oo awbare gobolnimo u raadi adiga iyo inta meherad laawaha somaliland ku ah; qof ahaan waan kuu khajilay waayo inta aad shaqaale le xill haya oo la eryi karo ka hadlayso ( miyaad horta ka hadashid xafiisyo loo dhiso ; 25 wasaaradood oo gobolka jooga ayey mid iyo laba xafiis leedahay!! waxa cadaatay dantii reerkaaga ayaad ka hor marisay dantii guud !! waxa muuqatay in aaney jirin lexejeclo aad u hayso dadka iyo dalkaba) illaahay ayaa goor roon u mada ka qabtay adiga iyo xisbigaagii, orod isqari ama tooba dheh.
5. Hal kale oo aan idhi : odayada, xildhibaanada iyo dhalinyarada marwalba warbaahinta waxa aad la tubantihiin wax dadka reer somalliland aan fagaarayaash la imanin oo dadka badabkii ka yaq-yaqsoodo oo ah ( kii hadlaaba in uu yidhaa WAANU BADAN NAHAY, ANNAGAA UGU BADAN !! XOOLAANU HAYSANAA, CASHUUR BAANU BIXINAA !!) intaa cid kale oo tidhaa dalka ma jirto!! tolkayow iska dhaafa khajilaade waan idiin yax-yaxay !! waa ayo cid-dan idinkula muranta maalin walba waad yartihiin ? eed iska dhicisaan mise raganimo ayaad u haysataan in ay tahay !! gayiga somalida dhaqanka jira lama arag LAAN DHEERE nin sheegta oo CABASHO iyo OOHIN wada mar walba ceeb!! daliil waxay u tahay khiyaamo mooyee waxba inaanay ka jirin waxa aad shubeysaan !! illaahay ayaa waxna badiya waxna yareeya!! rabi u toobad keena nimanyahow!! mida kale xoolahan iyo cashuurtan aad ka sheekaysaan ma wax dhaafsan baa ??? bakhshiish ka iyo wakiilnimada meheradaha habar awal ay borama ku leedahay??! ma raganimaa mise waa wax lala xishoodo , annaa cid kuu xiga e’ tolkayow khajila, khajila, khajila oo hadaad annaga naga xishoon weydeen ummada reer somaliland ka xishooda??? waa ceeb yar iyo weyn sharaf dhac isku raacu.
6. Hal daw ku ah baan lee yahay dawlada : gobolka awdal 25 iskuduwe ayaa jooga oo u taagan 25 wasaaradood hal ama laba ayaa xafiisyo leh waa dibad wareeg inta kale ; 17 toban ka mid ah waa isku beel kaliya beesha makaahiil makadoor cadeyna waan hayaa; ugu horeyn dawlada waxa laga rabaa xisbiga kulmiye hortii dawlad waxqabata maanaan arag e’ in la dhiso xafiisyada dawlada ee gobolka; marka xiga ( reer awdal dhexdooda ayaa saami qaybsi cadaalada u baahan e’ 25 kan isuduwe iyo soo buuxinta inta dhiman kadib si dhexe oo cadaalada haloo qaybiyo awoodaha gobolka oo dhamaan beelaha awdal oo dhan oo ay ku jirraan beelaha ciise iyo gabooye - bartaasaa u baahan saami qaybsi halaga bilaabo hawsha oo yaan naloo maqlin qaylada iyo oohinta in dan leh.)
Nabad baa naas leh ha lagu faro adeygo nabad galyada, midnimada ummada iyo wada jirkeeda, gees walba halaga shaqeeyo dhayida diifta nabaradii doorashada; dhan walba saami qaybsi daah furran ha la diyaariyo.
Waar caanaha dhan iyo hoo adigu dhan
Baa baa la isku dhiibaaye, mid haduu
Dhameystoo qudh-qudho dhiilka wada laaco
Dhaqan keena ceeb bay aheyd tani dhaga somali.